Loot Crate mechara rute na Spain | Akụkọ akụrụngwa
Taa bụ ụbọchị nke ọtụtụ mmadụ na-eche ogologo oge, ogologo oge anyị ga-echere ịnọdụ ala na-ele anya dị ka igbe dị ịtụnanya Ebugbe Echi E zigara ya n'ọtụtụ ebe mgbe anyị na-anọghị, mana nke ahụ bụ ihe gara aga, kemgbe ụnyaahụ Loot Crate na ụgbọ mmiri na Spain.
Ndị gị na-amaghị Loot Crate taa ga-achọpụta ọrụ dị ebube, ndị maara gị ga-enwe obi ụtọ, mana anyị ga-amalite na nke mbụ, m ga-akọwa nkenke ihe ọrụ a nwere, ihe kpatara ya ga-amasị gị na otu esi akwụ ya ụgwọ.
1 Gịnị bụ Loot Crate?
2 MLỌ MEGA
3 Jiri ohere a mee ihe
Gịnị bụ Loot Crate?
Loot Crate bụ ọrụ igbe ozi na-eju anya, Ọ dị mfe, ị denye aha site na ịkwụ ụgwọ ego maka oge ndenye aha (ogologo oge ndenye aha, dị ọnụ ala karịa ọnụ ahịa kwa ọnwa), n'oge ndebanye aha anyị ga-enweta kwa ọnwa (na njedebe) igbe nke nwere n'etiti Ngwa 6 na 8 metụtara ụwa Geek na Gamer, ị maara, egwuregwu, Ihe ndị ijuanya, DC, 1 nanị t-shirt, yana ihe a niile metụtara isiokwu kwa ọnwa, ya bụ, ọnwa ọ bụla dị iche.
Ihe na-eme pụrụ iche Ebugbe Echi banyere ndị ọzọ dị ka Geek mmanụ ọkụ? ka m gosi gi ...
Ọ bụ otu igbe ndị natara nwere ọnụahịa nke € 29 na uru dị n'etiti € 40 na € 50Agbanyeghị, onye nwere ihu ọma n'etiti ndị niile debanyere aha ya ga-enwe nsọpụrụ ịnata igbe dị iche na nke ha tụrụ anya ya, ha ga-enwe ihu ọma nke ịhapụ ihe oyiyi 4, akwụkwọ mpịakọta, ntụtụ na T-shirt ma kama ịnata (maka etinye ihe atụ nke ọnwa ndị gara aga) njikwa egwuregwu ma ọ bụ PC, ihe oyiyi mbụ na mbelata nke isiokwu Geek ma ọ bụ Gamer na-ewu ewu, naanị ihe, ngwa si ụdị dị ka Corsair, Razer, wdg ... A 50 "Samsung telivishọn, na mpempe, Mega Caja, a "igbe" na ọnụ ahịa karịrị € 2.000 maka ego dị p 29 ma nke ahụ ga-eme ka afọ ahụ dị mma ma na-atụ anya Krismas maka onye nwere obi ụtọ.
Jiri ohere a mee ihe
Ọfọn, ugbu a ị maara ihe Loot Crate bụ na ihe Igbe Mega bụ, ị makwaara otu o si arụ ọrụ, ugbu a ị makwaara ihe kpatara na ọ dị oke mkpa na ọ bịarutere Spain na ihe kpatara akụkọ a ji abanye na ngwaọrụ gadget, mgbe ahụ, ebe ị maara ihe niile a, gịnị kpatara na ị debeghị ụtụ?
Ihe ị hụrụ n'elu bụ ngụ oge, ma ọ bụ karịa onyogho nke Loot Crate timer, ị nwere ụbọchị isii ka ederede ederede a nwere ike ijide igbe Septemba gị, ọnwa a bụ "Summoners", yana ga-agụnye ihe Blizzard yana ụfọdụ Pokémon stof na nanị t-shirt. Edegola m ndebanyego, gini ka ichere?
Iji mechaa m hapụrụ gị vidiyo vidiyo banyere ihe anyị ga-ahụ n'ọnwa a na Loot Crate, cheta na ịdenye aha na ị ga- tinye njikọ a ma tinye usoro gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Loot Crate mechara rute Spain
M banye site na njikọ gị 🙂
Ego ole ka otu vidiyo nke 4K vidiyo na-ewere na iPhones ọhụrụ?